SAR အမှတ်အသား (“Stop and Reverse”) ညွှန်းကိန်းဟာ ဈေးကွက် အ၀င်၊အထွက် ကောင်းမည့် အမှတ်များကို ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီညွှန်ပြချက်ကို အသုံးပြုရတာ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ အမှတ်အသား(Parabolic)သည် ဦးတည်ရာကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ အစက်လေးများနေရာချထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Parabolic SAR မှာ လုပ်ဆောင်ချက် ၃ခု ရှိပါတယ်။
1. ၁။ ဒါဟာ ဦးတည်ရာများကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။
အစက်လေးများသည် ဈေးနှုန်းအောက်မှာ ရှိနေတဲ့အခါ၊ လမ်းကြောင်းသည် အတက်ဖက် (bullish) မှာရှိသည်။ ဈေးနှုန်းအထက်ဘက် ဖြတ်သွားပြီး၊ candles ရဲ့အထက်မှာ ဆင်းလာတဲ အစက် ၃စက် ပုံပေါ်လာရင် Parabolic အချက်ပြချက်များသည် (အကျပြောင်းပြန်) အထက်သို့ ပြန်ကန်တက်သွားမည်။ အစက်လေးများသည် ဈေးနှုန်းအထက်မှာ ရှိနေတဲ့အခါ၊ လမ်းကြောင်းသည် အကျဖက် (bearish) မှာရှိသည်။ ဈေးနှုန်းအကျဘက် ဖြတ်သွားပြီး၊ candles ရဲ့အောက်မှာ တက်လာတဲ့ အစက် ၃စက် ပုံပေါ်လာရင် Parabolic အချက်ပြချက်များသည် (အတက်ပြောင်းပြန်) အောက်သို့ ပြန်ထိုးကျသွားမည်။
2. ၂။ ဒါဟာ အထွက်မှတ်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် အကောင်းဆုံး tool များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒီကေတာအောက်ကို ဈေးကျသွားတဲ့အခါ ကာလရှည်အရောင်းအ၀ယ် (long positions) ကိုပိတ်ပြီး၊ Parabolic အစက်လေးများရဲ့ အထက်ကို ဈေးတက်သွားရင်တော့ ကာလတိုအရောင်းအ၀ယ် (short positions) ကိုပိတ်ပါ။ အင်ဒီကေတာ ရွေ့လျှားမှု၏ ဦးတည်ရာအတိုင်း အရောင်းအ၀ယ်အဖွင့်ကို ကိုင်ထားသင့်ကြောင်း သတိရပါ။
3. ၃။ ဒါဟာ trailing stop အတွက် တည်နေရာကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
အ၀ယ်အော်ဒါဖွင့်ထားခဲ့ပြီဆိုပါစို့။ ဈေးနှုန်းကလည်း ဆက်တက်နေဦးမယ်ဆိုရင် သင့် Stop Loss ကိုဝေးဝေးရွှေ့ထားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ လှိမ့်တက်လာတဲ့ ဈေးနှုန်းကိုလိုက်ပြီး၊ Parabolic SAR လည်း မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ အညွှန်းကိန်း၏ အစက်များက Stop Loss ကိုဘယ်နားရွှေ့ထားရမလဲဆိုတဲ့ သဲလွန်စလေးပေးပါလိမ့်မည်။ အတက်၊အကျဖြစ်နေတဲ့ဈေးကွက်မှာဆိုရင် Parabolic SARဟာ ကြာကြာ တက်၊ကျတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဘေးတိုက်ဈေးကွက် (ငြိမ်နေတဲ့ဈေးကွက်)မှာဆိုရင်တော့ မှားယွင်းတဲ့အချက်ပြချက်တွေရဖို့ အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမားပါတယ်။